Date: 22 août 2017 - 10:46
Misy ny mpivarotra sasany tena miheritreritra ny ho lasa lavitra mihitsy @ilay hafetsifetsena sy fitiavan-kely.
Hitany fa mandeha sy tian'ny olona ny zavatra hataony sy amidiny dia ahenany @zay ny haben'ilay zavatra amidiny,lasa hakariny ny vidiny.
Misy fotoana tsy mivarotra ela ela mihitsy izy dia aveo hakariny ataony fois 3 mihitsy ni vidin'ilay zavatra.
Tena mampalahelo ilay toe-tsaina.Tsy misy fifampitsinjovana intsony.
Re: mampalahelo ilay toe-tsaina
Date: 22 août 2017 - 10:53
Ary ny mpivaron-tena koa ve mba toizany namana?
Date: 22 août 2017 - 10:58
zay no tsy fantatro fa mbola tsy niditra t@reny tsika!
Date: 22 août 2017 - 10:59
Eo dia be laingalainga eo
Par: Tena marina
Date: 22 août 2017 - 11:09
Tena mitandrema rehefa miantsena fa misy hoatr'izao koa;
ilay mpivarotra épicerie eo akaikinay miompy saka fa be voalavo hono ao amin-dry zareo,
ny olana anefa dia ao @ ilay siramamy @ gony amidin-dry zareo ny saka no mivalan-drano,dia tsy hanariany ny siramamy iray gony izany,fa ilay lena iny fotsiny no asoriny dia hamidiny ihany ny ambina siramamy,@zay ilay fandrofana ilay siramamy ho lanjaina iny ihany no handraofany ilay amani-tsaka dia iny ihany no ampiasainy hivarotany avy eo
Date: 22 août 2017 - 11:29
Za aloha tsy mahita hoe aiza no tsy misy mifanambaka sy tsy rariny, ny ahy ny mba mahagaga ahy dia ilay any ampiangonana ,za aloha tsy victime, fa tsy tiko ilay fomba , misy mitaky hoe aiza ny karatra, population ve sa tsia ilay olona , dia misy fepetra vao manao batisa ilay zaza kanefa mitonontena ho fiangonan i jesoa tia zaza izao, ts ,
Par: ny hitako
Date: 22 août 2017 - 11:51
Nenah ndray no hitako le mpivarotra sakafo masaka ireny.Nisy fotoana aho mba nisotro ronono soja teny 67 teny fa mba liana hoe tsena vaovao dia mety mba milay.dia tena nilay kosa aloha ilay ronono t@zan fa nohon'ny hitany fa mandeha ilay iz d ts aiko raha notapohany ho lasa betsaka na nahena ilay fatran'ilay vovoka soja fa tena lasa matsatso be,tsisy tsirony maha soja azy tsn le izy avieo
Date: 22 août 2017 - 12:18
Za ndray mba nihinana lasopy akoho teny anosizato (sa efa ampitatafika io, tsy tadidiko), lay gargottes kely bdb milahatra eo am sisiny arabe reny. Natsiro be lay lasopy, noho ny lany lay izy d hitako lay rangahy mpivarotra mitsimpona an'lay pates nilatsaka tam tany d averiny ao anaty vitrine (ao anatin'lay vilia be misy pates hanaovana lasopy hafa) beurk!!!
Tsy hihinana am'reny tsony à fa aleo ihany mividy lafo.
Date: 22 août 2017 - 13:12
hitanareo ilay mpivarotra vary aminanana eo ambatolampy fijanonan'ny tomobil vao maraiana raha avy any atsimo,mba nijanona nisakafo maraina teo koa,fa nisy an'ilay zanak'i kala Jeanine mpivarotra hotely malaza wa t@zany nikapa ventiny tao andakozia ilay zaza kely tonga dia nalatsany t@ teo,tazana avy eo @ ilay efitra iray misy fihinanana sakafo,tonga dia noraofiny @ ttsy ilay kapa vetiny wa ary tsy nanasa tanana akory izy avy eo,dia nanolotra ny sakafo fa tonga dia tsy nety nisy nihinana ny kil fa izy indray avy eo no avo vava hoe : ôtran'ny olona tsy miteraka hono fa maloton-jaza avy dia hiavonana...
hahaha fa nga raha miteraka dia tsy manasa tanana rehefa avy nandray malonton-jaza?tsisy na olona iray aza nahasahy niteny azy fa samy lasa nitsoaka daholo....esy e a e
Date: 22 août 2017 - 13:15
zah koa ef tratran'ilay hoe akoho gasy akoho gasy,kay le izy asin'le mpivarotra carry de lasa mavomavo otran akoho gasy nefa kay poulet de chair b.
dia otrzan koa le eny Ambodimita,ataony be sakamalao be le rony dia tena taraiky enao we tena ron'akoho gasy kay fopla be le izy.tsss
Date: 22 août 2017 - 13:16
Fandraharahana anie izany e ...
Tsy maintsy mitady izay ahazoana tombotsoa betsaka indrindra fa tsy hitsipozipozy foana eo.
Rehefa tsy mangalatra dia izay
Nga rehefa ampiakarina lafo be ny entana dia afaka tsy mividy ianao na mijery @ mpifaninana aminy fa tsy antery.
Raha ohatra ka nofitahiny ianao dia ekeko hoe mampalahelo ilay toe-tsaina - fa raha efa io ny vidiny anaovany ny entany dia izay izany ...
Date: 22 août 2017 - 13:42
rabelapoaly//ilay izy anie raha mijanona toy ny taloha ny hatsarany sy habeany tsy maninona na hakariny aza ny vidiny.fa tena diso manararaotra be ilay mpivarotra.raha taloha 125g ohatra 400ar.dia izao lasa mandeha 700ar/100g.tsy rariny mihtsy.sady efa lasa ratsy no mbola lafo ihany.
Date: 22 août 2017 - 13:51
otran'ilay mpivarotra voankazo mandede eny antaninarenina izany,ataony tsara be daholo no aratiraty eny ivelany dia ny ratsy any ambany daholo @izay ilay fitoerany mbola bozaka be daholo ny ao ambany ,miesona mihintsy tratran'ny kely fa dada hahaha
dia ny havalin-dry zareo rehefa anotaniana hoe ny olona tsy hividy raha atao tsara daholo ny eo nefa lafo kou :tsy ratsy indray iny fika iny
Date: 22 août 2017 - 15:17
Aiza no tsy ho gisitra @ firenena ilay Gasikara
Date: 22 août 2017 - 16:07
Ireny indray FITAKA bavata leiroa a ...
Ireny sy ireo mpivarotra mandehandeha ... raha entana tokony ho 30 000 F ohatr dia mody lazainy fa 90 000 FMG miady varotra .. dia raha tsy mahalala ny tokony ho vidin'entana dia mijoboka : voafitaka soa amantsara (izay ilay HALATRA)
Fa ity efa mazava ny lalao. Manome ARGUMENTS izy hoe nisy izao sy izao fa io ny vidiny dia mazava izay.
Dia izay izany. Mazava ny fitsipi-dalao. dia asakasak'izay hividy na handany andro mitety mpivarotra - Mazava tsara ny lalao.
Manararaotra ve sa tsia ? mazava be io ... tsy misy fitaka fa 700 Ar / 125 grs hoy izy dia mividy ianao tsara, tsy mividy ianao - matoa izy mbola eo dia misy mividy izany any ambadika any.
Date: 22 août 2017 - 16:31
rabelapoaly//dia aiza zany ilay fifampitsinjovana?tadidio fa mifampiankina daholo ny olona.raha misy ny mpivarotra ka tsisy ny mpividy dia zero..raha misy indray mpividy nefa tsisy ny mpivarotra dia mbola zero ihany.donc,tokony hifampitsinjo fa tsy hifanararaotra.
Date: 23 août 2017 - 09:49
Io izany dia misy na eto amintsika na any ivelany.
Ary any Ivelany aza tena produit industrialisé mihintsy nefa zavatra tena arnaque be.
Miasa izany ny resaka lalan'ny Tolotra sy tinady. Fa rehefa tsy misy mividy io dia na izy mihena na izy miova taranja.
Izany no antony tsy tokony koa hividianana amin'ireny mpivarotra mandehandeha ireny.
Mety hoe mampalahelo ilay toe-tsaina fa ny rehetra no mila mailo ihany koa eo amin'ny fiainana fa tsy taitaitra hoe io misy fivarotana vaovao dia lasa miroboka , publicité tsy maintsy ataony raha vao misokatra izy, rehefa tamana ianao dia miova izy , fa anjaran'ny tsirairay no miala moramora. Fa isika izany dia manana ilay toetra menatra dia iny fa mividy foana sao lasa ratsy fihavanana indrindra raha fantatra ilay mpivarotra. Rehefa tsy tiana sy tsy zaka dia tsy vidiana. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny commande dia tsy mandoa vola fa aza mba menatra izany.
Par: Tena mampalahelo tokoa
Date: 06 septembre 2017 - 16:27
Misy tena maharikoriko mihitsy izany tranga tantarainareo izany ! Ilay resaka hygiene tena mmpitsoka!!
Mamosavy ny mpanjifa, tena farahidiny mihitsy ilay firenena sisa